मैले महसुस गरेको म्ह्य पुजा | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक २३ गते ०९:२९
जसले आफू भित्र को आत्मा लाई चिनेको हुन्छ । आफुले आफुलाइ चिनेको हुन्छ । जसले आफुले आफू लाई पुजा गर्ने हिम्मत गर्छ ,त्यसले मन भित्र भगवान जुनसुकै रुपमा बसेको छ भन्ने पक्का महसुस गरेको हुन्छ । मानिस हो त्यही मानिस भित्र भएको सैतान पनि कहिलेकाहिँ एकाएक जागृत भैदिन्छ र गल्ती को भागिदार बनाइदिन्छ । तर जसले आफ्नो आत्मा लाई जानेर पुजा गर्छ १गल्ती गरेपछि प्रायस्चित पनि अबस्य गर्छ नै, र जसले गल्ती गरेर प्रायस्चित गर्ने हिम्मत गर्छ त्यो नै मानिस अर्थात मानव हो । मानिस मा हुनुपर्ने मानवीय गुण हो ।
मैले यहाँ दर्शाउन खोजेको कुरा के हो भने नेवार समुदाय ले गर्ने म्ह्य पुजा अति महत्त्वपूर्ण छ । भनिन्छ जो दिमाग ले चल्छ उ उमेर छउन्जेल ,तागत छउन्जेल चल्छ ,किनकि दिमाग संधै जित्न चलेको हुन्छ । जित्न मात्रै खोज्छ । तर जो मन–मष्तिस्कले चल्छ उ मरेर पनि चल्छ अर्थात अमर हुन्छ । अझै भन्नु पर्दा उसले आफ्नो सन्ततिलाई आफ्नो संस्कृति संस्कार बचाएर ,बचाउन सिकाएर मात्रै आफू अर्थात शरीर मात्रै मारेर जान्छ । तर उ सधैं बाचिरहेको हुन्छ किनकि उसका सम्पुर्ण जीवनशैली बाचिँरहेको छ । परम्परा जोगिराखेको छ ।
काठमाडौ का पुराना घराना अर्थात नेवार हरुले हाम्रो कला संस्कृति जगेर्ना गरेकोले आजसम्म हामीले गर्व साथ नेपाल लाई जोगाउन सकेका छौं । किनकि जबसम्म मुटु स्वच्छ स्वस्थ्य हुन्छ तबसम्म मात्र मानिस जिउँदो हुन्छ । त्यसैगरी काठमाडौ उपत्यका पनि नेपाल र नेपाली को लागी देशको मुटु नै हो ।
यसले अर्थात उपत्यका ले सितिमिति गल्ती गर्दैन । समय लाई पछ्याउँदै आत्मसात गरेर हिड्न जानेको हुन्छ । जसरी काठमाडौ उपत्यका ले अर्थात यहाँका पुराना घराना ले पनि जानेर नजानेर २०४७ लाई स्वीकार गरेको थियो ।
यसले पुरानो समाज र नयाँ चार(आने लाई मिलाएको थियो । रहँदा बस्दा चार( आने लाई हतार भयो आफ्नै मात्रै उन्नति को लागि । धेरै लोभ र लालच मा पर्दा (कतिपय टुप्पि कसेर पढ्न बस्नेले पढाई संग संगै घरबेटी का छोरीलाई पढाए र मन्दिर मा गएर सिउँदोमा सिंदुर चढाए । तितो सत्य नै हो कि हामी पर्बतेले जे भयो भयो भन्छौं स्वीकार गर्छौ तर घरानिया नेवार समुदाय ले घरज्वाँइ त जबर्जस्ति स्वीकार गर्छन् तर आफ्नो संस्कार मा यदि त्यो ज्वाइँ आउन मानेन भने त्यो छोरी को मायाको कारण ले मात्र मानेको नाम मात्र को ज्वाइँ भए १जब प्राय ज्वाइँ हरु नेवार भन्दा उच्च थिए उनीहरुको भित्री प्रतिष्ठा मा पक्कै आँच आयो र यही अग्रगामी बिबाह र माक्र्सवाद पढाई ले नै मध्य मार्गी बाटो धर्म निरपेक्ष ले ठाउँ पाउन ठुलो मद्दत गरेको हो । किलो गाडे को हो ।)
मलाई पुरा पुर बिश्वास छ, ६२/६३ को आन्दोलन मा काठमाडौं उपत्यकाको भित्री घरानाको समर्थन थिएन छदै थिएन । यदि थियो भने आजभन्दा तीन बर्ष अघि खड्ग साट्ने जात्रामा गणतन्त्रबादी राष्ट्रपति वा कार्यकारीलाई स्वीकार यो नेवार घराना ले किन गरेन र राजालाई नै गद्दी मा नहुँदा पनि हार्दिक निमन्त्रणा गर्यो ? नेपाल बचाउनु छ भने काठमाडौ उपत्यका लाई बलियो बनाउनु पर्छ किनकि यही काठमाडौ भित्र छ । आराध्य देव पशुपति नाथ ,शक्तिशाली देवी मन्दिर हरु ,धर्म खम्बा हरु । यही धर्म खम्बा ,सांस्कृतिक धरोहर जोगाएर राख्ने संरक्षक राजसंस्था होईन ? बास्तबिक नेपाल यही उपत्यका होईन ? नेपाल र नेपाली को मुटु होईन ? अनि मुटु लाई चुडालेर सातटुक्रा पारिन्छ ? मुटु चुडाल्न खोज्दा नै होईन रगत बगेको ? सत्र हजार त देखावटी हो आज हरेक दिन दुर्घटना, बलात्कार हत्या के यो ख्याल ख्याल हो ?
घुमिफिरि सभ्य समाज को लागि राजसंस्था कुनै पनि कोणबाट अपरिहार्य छ १ आज काठमाडौ का घरानिया जनताले छातिमा हात राखेर भन्न सक्छन् राजा चाहिन्न भनेर ? के यो हाम्रो नेपाल लाई सदियौँ सम्म जिबन्त राख्नु पर्दैन ? हो नेपालको राजसंस्थाले पनि २०५८–२०६३ को समय लाई पनि सुक्ष्म अध्ययन भने गर्नै पर्छ, दुबै कोणबाट । आज तितो सत्य भन्नुपर्दा त चाहिने आगामी पाँच बर्ष सत्र साल हो तर ,समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ । हाम्रो मिलन बिन्दु भनेको २०४७ सालनै हो । यो नै दिल्लीको हार, युरोपेली मुलुकको नेपाल प्रतिको गिद्दे दृष्टिको हार हो नेपाली मात्र को जीत हो ।
आयातीत धर्म लाई होईन आआफ्नो धर्म र संस्कृति लाई आत्मसात गरेर आफ्नो आत्मा लाई एकाग्र मनले म्ह्य पुजा गरौं त हामीले हाम्रो वास्तविक अभिभावक कसलाई देख्छौँ ।
नजिकिँदै गरेको यमपंचक,नेवारी सम्बत ११४१ , साथै म्ह्य पुजा को शुभकामना ।
जय भैरव ,जय भिमसेन ,जय अजिमा,
श्री पशुपति नाथ ले नेपाली मात्र को कल्याण गरुन् ।
२०६३ सालपछि नेपालको अधोगति गराउनमा भारतीय षडयन्त्र मात्र थिएन, अमेरिका, अनमीन, यूरोपियन राष्ट्रले पनि नेपाललाई अन्धकार भविष्यतर्फ धकेल्न सफल बने । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकृत विशाल नेपाललाई टुक्रयाउन खोज्नेहरु यो देशका दुस्मन हुन् । तराईलाई विखण्डन गराउनमा प्रशासनिक संयन्त्र र गुप्तचर संस्था ‘रअ’ बाट प्रारम्भ भएको खतरनाक खेल यो । एकीकृत नेपाल रहे मात्र हामी नेपाली भएर बाँच्न पाउँछौं ।
२०६३ साल जेष्ठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको घोषणाको नाममा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएपछि जवरजस्त राजालाई लखेट्न सकिन्छ र राजाको पक्षमा जनता बोल्दैनन् भन्ने दाउ हेरर बसेको अमेरिका पनि नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन हान्न सकिन्छ र नेपाललाई क्रिस्चियनकरण गराउन सजिलो ठान्यो । विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य विस्थापित गरिए पछि नेपालका राजा स्वभावैले हिन्दु अधिराज्यको समर्थक भएता पनि उनको केही चल्दैन भन्ने अर्थ लगाइयो । त्यसपछि अमेरिका खुलेर भारतीय डिजाइन्लाई समर्थन गर्दै धर्मनिरपेक्षको समर्थनमा नेपालमा ओर्लियो । त्यसपछि आर्थिक स्रोतका साथ बेलायत लगायत यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुले पनि धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रको समर्थन गर्दै नेपालमा सरिक हुन आए ।